Indlu yale mihla ekwindawo yokuphosa amatye elwandle. - I-Airbnb
Indlu yale mihla ekwindawo yokuphosa amatye elwandle.
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguShazia And Faisal
Igumbi lokulala eli-3 elihle langoku kunye nendlu yokuhlambela emi-3 elala abantu abayi-6. Kwindawo yokuphosa ilitye ukusuka elwandle kunye nemibono ukuya ngasentshona phezu kweSandi saseKerrera. Imizuzu engama-20 ukuhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe i-Oban kunye nemizuzu emi-5 uhamba ngeenyawo ukusuka kwisikhephe esihamba ngeenyawo ukuya kwiSiqithi saseKerrera. Hlala kwaye uphumle kwibalcony okanye kwidesika kwaye ubukele izikhephe zidlula emini, wonwabele ukutshona kwelanga okumangalisayo ngokuhlwa kwaye ujonge iinkwenkwezi ebusuku.
Indawo yokuphumla, indawo yokutyela, ikhitshi kunye nebalcony kunye negumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela zikumgangatho ophantsi kwaye zifikeleleka ngokulula ngaphandle kwezinyuko. Amagumbi amabini okulala angaphezulu kunye namagumbi okuhlambela akumgangatho osezantsi obonelela ngokufikelela kumgangatho kunye negadi esezantsi ene-bamboos ejonge elwandle. Ipropathi ikhutshwa ngamaxesha athile njengoko ngamanye amaxesha isetyenziswa njengendawo yethu yokuphumla kwaye sonwabele unxweme olusentshona.
55" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, intambo yepremiyamu, I-Apple TV, izitishi zeTV eziqhelekileyo
I-Kilbowie Shore luphuhliso lwezindlu ezitsha kumda we-Oban kude nesiphithiphithi sedolophu. Izolile kwaye izolile kwaye ebusuku, kunokwenzeka ukuba uve amahlengesi kunayo nayiphi na enye ingxolo evela kwibalcony; iimbono zeenkwenkwezi ngobusuku obucacileyo azinakulinganiswa.
Umbuki zindwendwe ngu- Shazia And Faisal
Hi, we are Shazia and Faisal, we live and work in Glasgow and enjoy everything about the west coast of Scotland; in fact we enjoy it so much that in late 2019, we bought this new house in Oban as a second home and which we use for short breaks whenever we get the chance. We used to be airbnb hosts a few years ago and decided recently that it would be good to share our brand new holiday home with fellow airbnb'ers!
Hi, we are Shazia and Faisal, we live and work in Glasgow and enjoy everything about the west coast of Scotland; in fact we enjoy it so much that in late 2019, we bought this new h…
Sinokuhlala sinxibelelana ngeqonga le-airbnb kunye neefowuni zethu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Argyll and Bute Council